Kwaye kutheni kungabalulekanga
I-Mandarin IsiChina isoloko ichazwa njengelwimi olunzima, ngamanye amaxesha elinye lezona zinzima kakhulu. Oku kunzima ukuyiqonda. Kukho amawaka wabalinganiswa kunye namazwi angaqhelekanga! Ngokuqinisekileyo akumele kube nzima ukufunda umntu osemzini!
Unokufunda isiNgesi saseMandarin
Le nto ayikho into ekhohlisayo. Ngokwemvelo, ukuba uzimisele ukufikelela kwinqanaba eliphakamileyo, kuya kuthatha ixesha, kodwa ndidibene nabafundi abaninzi abaye bafunda ngeenyanga ezimbalwa (nangona zikhuthele kakhulu), kwaye baye bakwazi ukuthetha ngokukhululekile ngesiMandarine emva koko ixesha.
Qhubeka kunye neprojekthi yonyaka kwaye mhlawumbi uya kufumana oko abantu abaninzi banokukubiza ngokufanelekileyo.
Ukuba ufuna ukukhuthazwa ngakumbi kunye nezinto ezenza ukuba isiTshayina sifunde ukufunda, kufuneka uyeke ukufunda le nqaku kwaye ukhangele enye endaweni:
IsiShayina kunzima kakhulu
Ngaba oko kuthetha ukuba yonke intetho ngesiShayina kunzima nje umoya oshisayo? Akunjalo, akunjalo. Ngoxa umfundi ekwi-nqaku edibaniswe ngasentla yafikelela kwizinga elixubushayo lokuthetha ngeentsuku ezili-100 (ndathetha naye kumntu ngasekupheleni kweprojekthi yakhe), utsho ngokwakhe ukuba ukufikelela kwinqanaba elifanayo ngesiSpanish kuthatha iiveki ezimbalwa nje .
Enye indlela yokujonga ngayo kukuba i-Chinese ayinzima ngakumbi kwisinyathelo esimele uyenze, yinto yokuba kukho amaninzi amaninzi kunamanye ulwimi, ngokuthelekiswa nolwimi olukufutshane nawe. Ndibhalile ngakumbi malunga nale ndlela yokujonga ubunzima njengokuba kunamacandelo anesigxina kunye nesigxina apha.
Kodwa kutheni? Yintoni eyenza kube nzima kangaka? kule nqaku, ndiza kuchaza ezinye zezizathu ezibalulekileyo ezenza ukuba ukufunda isiShayina kunzima ngakumbi kunokufunda nayiphi na ulwimi lwaseYurophu. Ngaphambi kokuba senze oko, nangona kunjalo, kufuneka siphendule le mibuzo:
Into yokuqala ekufuneka siyiqonde ngayo kunzima kuye?
Akukho nto ithetha ngayo ukuba kunzima kangakanani ololu hlobo nolwimi olunjalo ukufunda xa kuthelekiswa nezinye iilwimi ngaphandle kokuba ufuna ukuba ngubani umfundi. Isizathu salokhu akunzima ukuyiqonda. Uninzi lwexesha elichithwe ukufunda ulwimi olutsha lisetyenziselwa ukwandisa isigama, ukusetyenziswa kwigrama, ukubiza amagama kunye nokunye. Ukuba ufunda ulwimi olukufutshane nawe, lo msebenzi uza kuba lula.
Ngokomzekelo, isiNgesi sabelana ngesigama esininzi nezinye iilwimi zaseYurophu, ngakumbi isiFrentshi. Ukuba uthelekisa ezinye iilwimi ezisondele ngakumbi, ezifana nesiTaliyane neSpanish okanye iSweden kunye nesiJamani, ukugqithwa kukukhulu.
Ulwimi lwami lwamaSweden kwaye nangona ndingazange ndifunde isiJalimane ngokusemthethweni okanye ngokungaqhelekanga, ndiyakwazi ukuqonda ngokulula, ebhaliweyo isiJalimane kwaye ngokuqhelekileyo ndiqonda iindawo zesiJamani ezixeliweyo ukuba zipholile kwaye zicacile. Oku kungakhange kufundwe ulwimi!
Ngokuqinisekileyo indlela enkulu ngayo le nto ayiyi kucaca kubantu abaninzi de kube bafunde ulwimi olunezityalo okanye olusondeleyo lwentsimi olugqithiseleyo ngolwimi lwakho lwasekuhlaleni. I-Mandarin Chinese ngumzekelo omhle wale nto. Kukho phantse akukho nto ikhoyo ngegama lesiNgesi.
Oku kulungile okokuqala, kuba amagama aqhelekileyo kwiilwimi ezinxulumene ngamanye amaxesha ahlukeneyo, kodwa ayongeza.
Xa ufika kumgangatho ophakamileyo kwaye akukho nto ekhoyo phakathi kweelwimi lakho kunye nesiMandarin, inani lemali liba ngumba. Sithetha ngamashumi amawaka emagama onke afuneka afundwe, kungekhona nje utshintshile kancane kwiilwimi zakho.
Emva koko, akunzima ukuba ndifunde amagama amaninzi aphezulu ngesiNgesi:
I-conservatism yezopolitiko Politisk konservatism
Ukugquma kwamagnetic I-Magnetisk resonans
Isifo sokugula Epilepsipatient
I-Alveolar Alveolar affrikata
Ezinye zezi zinto zinengqiqo ngesiTshayina kwaye ngaloo ndlela, ukuzifunda ngesiTshayina kunene kulula ukuba zenziwe ngokukhawuleza xa kuthelekiswa nesiNgesi okanye isiSwidi. Nangona kunjalo, loo nto ilahlekelwa ngongoma. Ndiyayazi la magama ngesiSweden, ngoko ukufunda kwabo ngesiNgesi kunene, kulula kakhulu.
Nangona ndingazi nje ngolwimi olunye, ndiza kukwazi ukuziqonda ngokuthe ngqo. Ngamanye amaxesha ndiza kuba nako ukuthetha. Ukucinga ukuba ngamanye amaxesha kuya kubakho ubuqhetseba!
Asoze enze iqhinga ngesiTshayina.
Ngoko, ngenjongo yale ngxoxo, makhe sixoxe ngendlela enzima ngayo isiShayina ukufunda isithethi esingumthonyama sesiNgesi, esinokufunda okanye ukungafunde olunye ulwimi, njengesiFrentshi okanye iSpeyin. Le meko iya kuba yinto efanayo kubantu baseYurophu abafunde isiNgesi ngaphandle kweelwimi zabo.
Kuthetha ntoni "ukufunda isiMandarin"? Ukuthetha ngokucacileyo? Ubuninzi bendawo?
Kwakhona kufuneka sixoxe ngento esithetha ngayo ngokuthi "sifunda isiMandarin". Ngaba sithetha kwinqanaba apho unokucela izikhokelo, ithikithi lokuqeqeshwa kwincwadi kwaye uxoxe ngezihloko zemihla ngemihla ngezikhulumi zaseChina? Ngaba sifaka ukufunda nokubhala, kwaye ukuba kunjalo, ngaba sibandakanya ukubhala ngesandla? Okanye ngaba mhlawumbi sithetha uhlobo oluthile lwamanqanaba afundiswayo asemveli, mhlawumbi into efana neyesiNgesi yam?
Kwinqaku enye , ndiyathetha ukuba kutheni ukufunda isiTshayina kungekho nzima ukuba uzimisele ukwenza isiseko esisiseko ngolwimi oluthethiweyo. Ukwenene ngokwenene uhlawule imali apha, ndiza kujonga ubuchule obuphezulu ngakumbi kwaye ndakanya ulwimi olubhaliweyo. Ezinye zeengongoma zilapha zifanelekileyo kubaqalayo kunye nolwimi oluthethiweyo, kunjalo:
Abalinganiswa namagama - Musa ukukholwa abantu abathi ufuna iimpawu ezingama-2000 nje kuphela ukuba ufunde okuTshayina, kubandakanye nezinye izibakala ezingenangqiqo ukuba unokufunda ezininzi iimibhalo ezingaphantsi kwelo. Ngamahlamvu angama-2000, awukwazi ukufunda nantoni na ebhaliweyo kwizivakalisi zabantu abadala. Phinda kabini inamba uze ufike kufuphi. Sekunjalo, ukwazi abalinganiswa abaneleyo, kufuneka ukwazi amagama abawenzayo kunye negrama elawula umyalelo apho bavela khona. Ukufunda abalinganiswa be-4000 akulula! Ekuqaleni, unokuba ucinga ukuba abalinganiswa bokufunda kunzima, kodwa xa ufunde amawaka ambalwa, ubagcina ukwahlukileyo, ukwazi ukuwasebenzisa kwaye ukhumbule indlela yokubhala umxholo kuba yinkinga yangempela (kubandakanywa nezithethi zamandulo kufuneka ndithi ). Ukufunda ukubhala kuthatha ixesha elide kunokufunda ukubhala ulwimi olunjengeFrentshi.
Ukuthetha nokubhala - Njengokuba ukufunda amawaka wabalinganiswa akwanele, kufuneka kwakhona ukwazi ukuwabiza, okona ngokubanzi okanye ngokuchanekileyo ngokuhambelana ngqo nendlela abhaliweyo ngayo. Ukuba unako ukubiza iSpanishi njengesithethi esingumthonyama saseNgesi, unokukhetha ukubhala kwakhona, ubuncinane ukuba ufunda iindibano zesipelingi. Akunjalo ngesiTshayina. Ukwazi indlela yokuthetha into into ekutshilo kancinci malunga nendlela ebhaliweyo kunye nangona kunjalo. Akuyinyaniso ukuba isiTshayina hayikho ifowuni , nangona kunjalo, kwaye unokusebenzisa oko, kodwa kusenza ukufunda kube nzima.
Akukho nto ikhululekile - sele ndibhale ngolu hlobo ngasentla. Ukuba awuzange ufunde isiTshayina okanye nayiphi na ilwimi ehambelana nxamnye neyakho, awuyazi ukuba unani na ukukhululeka xa ufunda ulwalamagama oluhambelanayo. Ngokuqinisekileyo kunzima ukwenza uqikelelo, kodwa masithi nje kukho ukugqithisa okukhulu phakathi kwezemfundo, unyango lwezakhono zobuchwepheshe kwiilwimi zaseYurophu. Kufuneka ufunde konke okokuqala ukususela ngesiTshayina.
Ulwahlulo lweelwimi - isiTshayina lunolwimi oluninzi kwaye luthethwa phezu kwendawo enkulu ngabantu abangaphezulu kwezigidigidi. I-Mandarin yimiyalezo eqhelekileyo, kodwa kukho uguquko oluninzi phakathi kweso sizwe, kwingingqi nakwezinye. Akuqhelekanga ukuba namagama amaninzi into efanayo (jonga igama elithi "ngeCawa" ngomzekelo). Kananjalo sinomlinganiselo omkhulu kakhulu phakathi kwesigama esisisigxina kunye nesigxina. Emva koko sinesiXhosa, esicatshulwa njengelwimi phakathi kolwimi oludla ngokutshabalalisa kwiiShayina ezibhalwe namhlanje. Nokuba uthe wagxininisa kumaMandarin anamhlanje, zonke ezinye iinguqu ziqhubeka ziphazamisa kwaye zidibanisa izinto kuwe.
Ukubhengezwa kwamagama kunye neetoni - Nangona ukuthetha okusemgangathweni kulula ukuhla xa unomfundisi ofanelekileyo kwaye uchithe ixesha elifanelekileyo, amathoni anzima kakhulu ukuqonda abafundi abaninzi. Kwedwa, ewe; ngamazwi, ewe; kodwa ngentetho engokwemvelo ngaphandle kokucinga kakhulu malunga nayo, hayi. Kunzima ukuva ulwahlula phakathi kweelwimi ezibhekiselelwe ekuqaleni kunye nokugqibela kodwa enye ithoni. Ngaphandle kokuba unesakhono esinamandla, mhlawumbi uqhubeka wenza iiposi zetayiti ebomini bakho bonke. Emva kwexesha, abayi kuphazamisa unxibelelwano oluninzi, kodwa kuthatha ixesha kwaye abafundi abaninzi bangafiki khona.
Ukuphulaphula nokufunda - Kwinqaku malunga nokuba kutheni ukufunda isiTshayina kulula, ndabhala izinto ezininzi ezenza kube lula ukuthetha, njengokungabikho izithintelo zesenzo, akukho besini, akukho maxesha kunye nokunye. Nangona kunjalo, olu lwazi lusekhona xa uthetha, alukhenkethi nje ngolwimi olubhaliweyo okanye oluthethiweyo. Amagama abukeka kwaye avakale enye. Oku kuthetha ukuba kulula ukuthetha kuba awudingi ukukhathazeka okuninzi, kodwa kwenza ukuba ukuphulaphula nokufunda kunzima ngenxa yokuba unolwazi olungaphantsi kwaye kufuneka wenze okunye ukutolika ngokwakho. Esi sisiphumo seTshayina kuba ulwimi lokuzimela. Ukuphulaphula kunzima ngakumbi ukuba i- Mandarin inenani elincinci lezandi , kuquka neetoni, ezenza kube lula ukudibanisa izinto kunye nenani lama-homophones okanye ama-homophones asondeleyo (amagama anomsindo ofanayo okanye ofanayo) Mkhulu kakhulu xa kuthelekiswa nesiNgesi.
Inkcubeko kunye neengcinga - Enye yezona zinto ziphazamisa ukufikelela kwizinga elizifundisayo kwisiTshayina lixabiso elikhulu lenkcubeko ongazi. Ukuba ufunda isiFrentshi, unokwabelana kakhulu kwimbali yenkcubeko kunye nolwazi malunga nehlabathi kunye nezithethi zasemhlabeni, kwaye nangona ufuna ukuzalisa izikhewu ezikhethekileyo kwiFransi, isixokelelwano esiqhelekileyo sinye. Xa abaninzi abantu beqala ukufunda isiTshayina, abazi lutho malunga nehlabathi lesiTshayina. Ngaba unokucinga ukuba kuthatha ixesha elingakanani xa udala ukuba ufunde yonke into malunga nehlabathi oyaziyo ngoku kwiminyaka neminyaka yokufunda, ukuhlala kweli lizwe, ukufunda amaphephandaba, iincwadi kunye njalo? Ukongezwa kule nto, ukucinga okanye ukucinga ngamanye amaxesha kunzima kakhulu. Ukuzihlaziya akusoloko kusebenza ngendlela efanayo, oko umntu ongumTshayina acinga ukuba kunengqiqo kunokuba kungenangqiqo kuwe, ixabiso lezithethe, amasiko kunye namasiko ahluke. Kwaye nangokunjalo. Ukuba ufuna ukufunda ngokubanzi malunga nenkcubeko kunye nengqondo, ndincoma incwadi ethi Geography of Thought .
Ingaba kunzima ukuba kunzima kangakanani?
Ngoku ungacinga ukuba ukufunda isiTshayina akunakwenzeka, kodwa njengoko ndithethile kwisingeniso, akunjalo ngokwenene. Nangona kunjalo, njengokuba kunjalo neminye imisebenzi emininzi, ukuphumelela kokusebenza kuthatha ixesha elide. Ukuba ufuna ukufikelela kwinqanaba lesithethi esikhulumiweyo, sithetha ngokuzinikela ngokuzeleyo kunye neemeko zobomi ezikuvumela ukuba usebenze ngolwimi okanye uququzelele kuyo.
Ndiye ndafunda isiTshayina malunga neminyaka engama-9 kwaye ndiqhagamshelana nantoni na izinto andingazi. Ndilindele ukuba oku akuze kubeke ukuba kube njalo. Ewe, ndifunde ulwimi ngokufanelekileyo ukuze ndikwazi ukuphulaphula, ukuthetha, ukufunda nokubhala phantse nayiphi na into endiyifunayo, kuquka neendawo ezizodwa kunye nezobuchwepheshe endaziwayo.
Phantse bonke abafundi babeya kuhlala bazininzi, ngaphantsi. Kwaye kunjalo, mhlawumbi. Akudingeki ukuba uchithe iminyaka elishumi okanye ube ngumfundi ophakamileyo kwizifundo zakho ukuhlawula. Ukufunda nje nje ngeenyanga ezimbalwa kwaye ukwazi ukuthetha izinto ezimbalwa kubantu baseTshayina ngolwimi lwabo kungenza konke umehluko. Iilwimi azifani; abazisebenzisi ngokukhawuleza kwinqanaba elithile. Ewe, baya kuba luncedo ngakumbi ngokuyaziyo, kodwa ngokuthe ngqo ukuba ufuna ukuhamba kangakanani ukuya kuwe. Kwakhona kuwe ukuba uchaze oko "ukufunda isiMandarin" kuthetha. Ngokomntu, ndicinga ukuba isixa sezinto engingazi malunga nolwimi kwenza ukufunda kube mnandi kwaye kumnandi!
Iveki yesiFrentshi yesizwe
Ubasute yama - Funda kwiNdaba
Inkcazo yeNkcazo (iSigaba sokuTshintsho kwiKhemistry)
Indlela yokwenza i-Sponge Rubbers kwi-Your Table Tennis Blade
Ubulumko: Isipho soMoya oyiNgcwele
Ukugwetywa kwamaSilamsi ka-9/11